Axmed Madoobe oo Sheegay in Farmaajo uu Dalka ku rigay God
Home Wararka Somaliya Jubbaland Axmed Madoobe oo Sheegay in Farmaajo uu Dalka ku rigay God
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee xilligaan dalka, shirarkii frashilmay ee uu uga qyeb galay Magaalada Muqdisho iyo mowqifka Jubbaland ee muddo kororsiga Golaha Shacabka ay sameeyeen.
Axmed Madoobe oo la hadlayay qaar kamid ah Bulshada Rayidka Jubbaland ayaa sheegay in marnaba aysan wax sharci ah u laheyn Golaha Shacabka inay laalaan heshiiskii 17-kii Serptember iyo inay muddo kororsi sameeyaan.
Waxaa uu ku eedeeyay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dalka uu god ku ridayo, waxaana uu ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed inay tashadaan.
”Madaxweynaha Xiligiisu dhamaaday hadii aan maanta laiska qaban wadankaan dib ayuu noqonayaa meel kale ayuu tagayaa,maanta waxaad ogtihiin in reer Muqdisho ay cabsi kujiraan ayuu yiri” Axmed Madoobe
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Hay’adihii dowladda dhamaan la burburiyay , waxaana uu ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo in uu ku fashilmay in dalka laga qabto doorasho xor iyo xalaal ah, isla markaana kaliya uu u muuqdo kuriga uu ku fadhiyo.
Hadalka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli ay fashilmeen shirarkii looga hadlayay Arrimaha doorashooyinka, isla markaana muddo kororsigii ay sameeyeen Golaha Shacabka ay kasoo horjeesteen , Siyaasiyiinta mucaaradka, Bulshada Rayidka iyo Beesha Caalamka.
Previous articleKooxda Shabaab oo la wareegtay Deegaano ka tirsan Gobolka Mudug ee Galmudug
Next articleWararkii ugu danbeeyay Xiisadii ka jirtay Muqdisho iyo Dowlada oo ka hadashey Weerarka Saadaq Joon